Home Wararka XOG:Ciidanka Kenya oo dekadda Kismaayo ka hela $12Milyan oo doollar
XOG:Ciidanka Kenya oo dekadda Kismaayo ka hela $12Milyan oo doollar
Ciidamada Dowladda Kenya ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay qeyb ka yihiin dhoofinta Dhuxusha Soomaaliya.
Sidoo kale Ciidanka Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay u oggolaadaan Al-shabaab in ay helaan lacag dhan $10 Milyan oo doollar Sanadkiiba.
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in Ciidanka Kenya ay Dekadda Kismaayo ka dhoofiyaan 4.5 ilaa 6 Milyan oo Jawaanno dhuxul ah Sanadkiiba,taas oo ay ka dhalato lacag ka badan $20Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Qaramada Midoobey ayaa sanadkii 2012kii mamnuucday dhoofinta dhuxusha Soomaaliya hayeeshee Ciidanka Kenya ee jooga Kismaayo ayaa waxaa ay Jawaankiiba canshuuraan lacag dhan $2 Doollar,halkaas oo ay Sanadkiiba ka helaan lacag dhan $12 Milyan oo doollar Sanadkiiba.
Dhinaca kalena Ciidamada Booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay ku lugleeyihiin Sokor laga dejiyo Dekadda Kismaayo oo la geeyo dhulka Soomaalida ee Kenya,halkaas oo Saraakiil Boolis ah ay ku lugleeyihiin Sokorta sida Kontara baanka ah looga dejiyo Kismaayo.
Ciidanka Keydka Booliska Kenya ee dhawaan la geeyay Waqooyi Bari ayaa dhawaan gacanta ku dhigay in ka badan 100 Gawaarida waaweyn ah oo waday Sokor,markii ay u diideen in ay gudaha Kenya galaanna waxaa la xiriiray Saraakiil sar sare oo ka mid ah Booliska Kenya,kuwaas oo Ciidanka Keydka ah faray in xoogaa lacag ah ay ka qaataan kaddibna ay fasaxaan.